Dimitri Mascarenhas wants New Zealand bowlers to raise their game
New Zealand's bowling coach Dimitri Mascarenhas has asked his team's bowlers to improve their performances during the ongoing tour of Zimbabwe and South Africa.
Another 90 from Williamson helps New Zealand take series
Kane Williamson missed out on a century but his 90 nevertheless helped New Zealand win the third and final One-Day International in Harare against Zimbabwe by 38 runs, coming from one game down to win the series.
Guptill, Latham steer New Zealand to 10-wicket win
Martin Guptill and Tom Latham struck unbeaten centuries as New Zealand chased down a target of 236 set by Zimbabwe, winning by 10 wickets to level the ODI series 1-1 in Harare.
Mr Predictor - Can England seal the Ashes at Trent Bridge? Cricket World TV
Pakistan set to tour Zimbabwe after 30th September
Days after reportedly cancelling their limited-overs tour of Zimbabwe that was due to take place next month, Pakistan have decided to go ahead with the tour but only after 30th September.
Pakistan's tour of Zimbabwe abandoned
The cricketing boards of Pakistan and Zimbabwe have decided to cancel the bilateral limited-overs series between the two teams that was scheduled to take place next month.
The Board of Control for Cricket in India has announced the squad for India’s upcoming tour to Zimbabwe, which kicks off on 10th July in Harare.
India's upcoming tour of Zimbabwe has landed in doubt due to an ongoing tussle between the Board of Control for Cricket in India and Zimbabwe Cricket's broadcasting sponsor Ten Sports.
India's tour of Zimbabwe confirmed
The official confirmation regarding India's tour of Zimbabwe due in July has been made by Zimbabwe Cricket (ZC).